Madaxda GALMUDUG oo xilkii laga wada qaaday iyo Shaakir oo kusoo haray - Caasimada Online
Home Warar Madaxda GALMUDUG oo xilkii laga wada qaaday iyo Shaakir oo kusoo haray
Madaxda GALMUDUG oo xilkii laga wada qaaday iyo Shaakir oo kusoo haray
Dhuusamareeb (Caasimadda Online) – Baarlamaanka Maamulka Galmudug ee kala fadhiya Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa xilalkii ka qaaday dhamaan Madaxdii Galmudug ka hor Ahlu Sunna.
Kulan maanta magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa waxa ay kaga doodeen mooshinka ka yaalla Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug.
Kulan Xildhibaannada Galmudug ee Fadhiya Dhuusamareeb ay maanta ku yeesheen Magaaladaasi waxaa ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen qofkii ugu dambeeyay afarta qof ee ugu sarreysa Galmudug kaas oo ah Madaxweyne ku xigeenka Maxamed Xaashi Carrabeey.
Khilaafka Galmudug waxaa ka hadlay Maamul Goboleedyada iyo Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka Dowladda Federaalka ah.
Maamul Goboleedyada War-saxaafadeed ay soo saareen maanta waxaa ay dowladda dhexe ugu baaqeen in ay faragelinta ka joojiso Galmudug,islamarkaana Ciidamada qaranka aan loo adeegsan arrimaha ka jira Galmudug.